Igbo, John: Lesson 046 - Ntuchapụta nke ndị na-eso ụzọ (Jọn 6:59-71) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 046 (Sifting out of the disciples)
5. Ntuchapụta nke ndị na-eso ụzọ (Jọn 6:59-71)
59 O kwuru ihe ndị a n'ụlọ nzukọ, ka ọ na-ezi ihe na Kapanaum. 60 Ya mere ọtutu nime ndi nēso uzọ-Ya, mb͕e ha nuru nka, ha siri, Okwu a bu okwu siri ike. Ònye nwere ike ige ya ntị?"
Okwu a banyere nri nke Chineke na nri nke ozu Jizọs ka epụtara n'oge dị iche iche. O kwughachiri ihe ụfọdụ wee mee ka ọdịnaya ahụ dịkwuo nwayọọ nwayọọ. Otú ọ dị, John chịkọtara nkwurịta okwu ahụ n'otu nchịkọta. Anyị na-ahụ Jizọs n'ime ụlọ nzukọ dị na Kapaniọm na-akụziri ndị na-ege ya ntị n'ụzọ doro anya na ọ dị mma karịa Mozis, nakwa na ndị kwere ekwe niile kwesịrị ịṅụ ahụ na ọbara ya.
Ndị na-eso ụzọ ya kwesịrị ntụkwasị obi enweghị nghọta dị otú ahụ. Ha malitere ịjụ ajụjụ ma nwee obi abụọ. Ha kpebisiri ike irubere Chineke isi ma jeere ya ozi, ma ha nwere mgbagwoju anya site na njirimara nke aru na ọbara na-eri ma na-aṅụ. Mgbe ha nwere nhụjuanya, Onyenwe anyị ji obi ebere meeghe uche nke ndị na-eso ụzọ ya kwesịrị ntụkwasị obi, iji ghọta ilu nke achịcha.
61 Ma ebe Jisus matara nime onwe-ya na ndi nēso uzọ-Ya tamuru ntamu megide nka, Ọ si ha, Ọ bu nka nēme unu ka unu ma n'ọnyà? Ya mere, ọ buru na unu gāhu Nwa nke madu ka Ọ nārigo rue ebe Ọ nọ? 63 Ọ bụ mmụọ na-enye ndụ. Anụ ahụ abaghị uru ọ bụla. Okwu m na-agwa gị bụ mmụọ, ọ bụkwa ndụ.
Jizọs ghọtara echiche ndị na-eso ụzọ ya, ọ baghịkwa ajụjụ ha mba. Mkpesa ha abughi nmekorita ha dika ndi n'ekwegh ekwe, ma obu n'ihi nghhota ha banyere ilu nke omimi nke Kraist. Mana tupu Jisos enye ha ihe omuma, o kpochapuru ha ihe omuma nke ilu ahu, nkowa zuru oke nke nzoputa nzoputa maka uwa.
Ọ ghaghi ịnwụ n'ihi ha ka ha na-eri nri n'anụ ahụ ya n'ụzọ ime mmụọ, kama ha ga-arịgokwara Nna ya, site n'ebe o si gbadata. Ọ bụ onye ahụ si n'eluigwe bịa, ma ọ gaghị anọgide na ụwa anyị. Ha hụrụ ya ka ọ na-eje ije n'ọdọ mmiri ahụ ma chọpụta na ọ karịrị mmadụ. Ọ ga-agbagokwuru Nna ya iji wụsa mmụọ ya na ụmụazụ ya. Nke a bụ nzube nke ọnwụ ya na nzube nke ọbịbịa ya. Onyinye ya nye ha abugh ihe banyere anu aru ya, kama obata abata n'obi nke ndi soro ya; ọ bụghị ahụ ya, ma Mmụọ Nsọ ya abata n'ime anyị.
Jizọs gosiri na anụ ahụ abaghị uru ọ bụla. Na mbụ, e kere anyị dum ma dị mma, ma echiche anyị na ịbụ ndị rụrụ arụ. N'ime ahụ anyị, anyị enweghị ikike maka ezi ndụ, kama ọ bụ maka ime mmehie. Ahụ ya adighi ike, nke mere na o siri, "Lelee anya ma kpere ekpere ka i ghara ibata n'ime onwunwa, Mo na aru, ma anu aru adighi ike."
Otuto Chineke, Jisos buru aru ya na Mo Nso mgbe nile. Mbuo nke Mo Nso nime ya bu ihe omimi nke odidi ya. O choro inye ayi nnweko nke Mo Nso na aru site n'onwu ya, nbilite n'onwu na nelu igwe, na ibibi nke Mo Nso ya n'olu aru ayi. N'oge gara aga, ọ kwadoro Nikọdimọs na mmiri na Mmụọ Nsọ na-enyere anyị aka ịbanye n'Alaeze Chineke, na-ekwu banyere baptizim Jọn na mmiri, na baptism nke Mmụọ na Pentikọst. N'okwu nke okwu banyere achịcha nke ndụ, Kraịst kọwaara ndị na-eso ụzọ ya na ọ ga-abịakwute ha na ha ka ha na-eri nri anyasị nke Onyenwe anyị: Ebe ọ bụ na ihe nnọchianya ndị a abaghị uru ọ bụla, ọ gwụla ma Mmụọ Nsọ abịawo anyị. Ọ bụ Mmụọ Nsọ na-eme ka ndụ, anụ ahụ abaghị uru. Nanị mmụọ nke Kraịst na-emesi ọnọdụ ya ike n'etiti ndị kwere ekwe.
Kedu ka Mmụọ Nsọ si abịakwasị anyị? Nke a bụ ajụjụ bụ isi maka ndị niile na-akwadebe ịṅụ oke ahụ na ọbara iji bie ndụ zuru oke na Kraịst. Jisos zara nani, "Nuru okwu m, meghe obi unu nye akuko nke ozioma." Kraist bu Okwu nke Chineke; onye nuru okwu ya ma tukwasi obi na ya juputara na Mo Nso. Juputa obi gi na ike nke Chineke, site na iburu otutu akwukwo nso. Guzosie nkwa nile nke Chineke ike, mezuo nkwa ya nile, gi onwe gi gadi ike karia ndi necheputa ihe na ihe omuma ha. N'ihi na site n'okwu nzọpụta nke Kraịst, Onye Okike nke eluigwe na ala ga-abịakwasị gị, na-enye gị ndu na ikike ya.
64 Ma ufọdu nime unu nēkweghi ekwe. N'ihi na Jisus mara site na mbu, na ha bu ndi nēkweghi, na onye ọ bu onye gārara Ya nye. 65 O we si, N'ihi nka ka M'siri unu, na ọ dighi onye ọ bula puru ibiakutem, ọ buru na ọ bughi Nnam nyere ya.
Ọtụtụ ndị na-eso Jizọs aghọtaghị isi ihe a ma hapụ ya. Okwu banyere iri anụ ya na ịṅụ ọbara ya bụ ebe ọrụ ozi ya na Galila, ihe mere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ji hapụ ya. Ya mere ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ kwụsịrị mgbe nkwurịta okwu a gasịrị. Uche nke ndị gbara ọsọ ahụ adịghị njikere ịghara ịkpa ókè n'echiche nke mmadụ, na-adabere na Jizọs n'enweghị ihe ọ bụla. Ha amaghi eziokwu nke Chineke ya ma ghara ime ka ya na ndu ya dakwasi ya.
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya na ụfọdụ n'ime ha ga-emegide mmụọ ya wee mechie ya. Onyenwe anyi nwere ike ihu onye obula n'ime obi nke obi ya. Ọ maara aghụghọ Judas Iskarịọt bụ onye sonyeere ìgwè ahụ site ná mmalite. Judas adigh njikere imeghe onwe ya kpam kpam nye Mo Nso nke ihu Kraist. Jesus ama ọfiọk nte enye eketịn̄de aban̄a akpa esie ke kiet ke otu mme owo emi ẹdida enye ayak.
N'ikpeazụ, Jizọs kwughachiri ihe omimi nke na ọ dịghị onye nwere ike ikwere na Jizọs ma e wezụga ọrụ nke Mmụọ nke Chineke ná ndụ ya. Ọ dịghị onye nwere ike ịkpọ Jizọs Onyenwe anyị ma ọ bụ site na Mmụọ Nsọ. Okwukwe anyi abughi nani ihe ndi kwere ekwe, kama obosara onwe ayi na Jisos site oru nke Mo Nso. Meghee nkpuru obi gi na ihe nke nna nke bu nna, emela ihe obula nke eziokwu nke Jizos. Mgbe ahụ, ị ga-ahụ ọbịbịa ya n'ime gị ka ị nọrọ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ achịcha nke Ndụ kwadebeere gị.
Olee otú Mmụọ nke na-enye ndụ si sonye n'ahụ Kraịst?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:07 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)